Hyogo प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
हिमेजी क्यासल, ह्योगो, जापान = शटरस्टक
Hyogo प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
ह्योगो प्रान्तमा हिमेजी क्यासल छ, पर्यटक आकर्षण जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। लगभग सबै महल टावर र यस महलको टावरहरू बाँकी छन्। यस महलले चित्रण गरेको रूपमा, ह्योगो प्रान्तमा जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पर्यटक आकर्षणहरू छन्। तपाईं ह्योगो प्रान्तमा किन गहिरो यात्रा गर्नुहुन्न?
Hyogo को रूपरेखा
हिमेजी महल - हिमेजी शहर)
अरिमा ओन्सेन (कोबे शहर)
किनोसाकी ओन्सेन (टोयोका शहर)
Hyogo को नक्शा
पहिले, म ह्योगो प्रान्तमा बस्छु। मलाई यो प्रिफेक्चर मन पर्छ। मलाई लाग्छ Hyogo प्रान्तमा तीन पक्षहरू छन्।
सर्वप्रथम, यो यातायातको एक प्रमुख हब हो जुन पश्चिम जापान र कन्साई क्षेत्रका विभिन्न भागहरूलाई जोड्दछ। त्यसैले ह्योगो प्रान्तमा, हिमेजी क्यासल १ 17 औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। टोकुगावा शोगुनेटले हिमेजी कैसलमा पश्चिम जापानबाट शत्रुहरूलाई रोक्न निर्णय गरे।
दोस्रो, यो कन्साई क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारको आधार हो। उन्नाइसौं शताब्दीमा, कोबेको बन्दरगाह ह्योगो प्रान्तको दक्षिणी भागमा निर्माण गरिएको थियो। यो बन्दरगाह विदेश देशहरू र कन्साई क्षेत्रलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो।
तेस्रो, त्यहाँ ह्योगो प्रान्तको उत्तरमा धेरै पुरानो जापानीहरू छन्। विशेष गरी टोयोका शहरमा जापानको समुद्री किनारमा, त्यहाँ एउटा पुरानो स्पा शहर छ जसलाई किनोसाकी ओन्सेन भनिन्छ। तपाई ह्योगो प्रान्तमा यस्तो पुरानो जापान भेट्न सक्नुहुन्छ।
Cherry खिल मौसममा Himeji महल, Himeji, जापान = Pixta
हिमेजी, जापान हिमेजी कासलमा वसन्तमा चेरी ब्लासम मौसम = शटरस्टक
हिमेजी क्यासल जापानको सब भन्दा सुन्दर महल भनिन्छ। र यो महल पनि जापानको सबैभन्दा पूर्ण महलमध्ये एक हो भनिन्छ।
हिमेजी क्यासल १ 1346 मा निर्माण गरिएको हो भनिन्छ, तर वर्तमान महल १ 17 औं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण गरिएको थियो। यस समयमा, जापानी महल निर्माण गर्ने टेक्नोलोजी उच्च स्तरमा थियो। किनकि १ 16 औं शताब्दीमा समुराईले लडेको समय जारी रह्यो र किल्ला निर्माणको लागि टेक्नोलोजी त्यस अनुरूप पोलिश गरियो। शत्रुको आक्रमणहरू हटाउन बिभिन्न सरलता पनि जम्मा भयो। जापानको १ peaceful औं शताब्दीमा टोकुगावा शोगुनेटको शासन अन्तर्गत शान्तिमय युग थियो। त्यतिखेर, तिनीहरूको कौशलता र चतुरता हिमेजी क्यासलमा प्रयोग भएको थियो। त्यसकारण, Himeji महल जापानी महल को पूर्ण रूप हो भनिन्छ।
हिमेजी क्यासलको सम्बन्धमा, मैले यसलाई जापानी महलहरू बारे लेखहरूमा पहिल्यै प्रस्तुत गरेको छु।
तस्विरहरु: हिमेजी महल वसन्त मा - चेरी खिल संग धेरै आकर्षक!
जापानमा सबैभन्दा प्रभावशाली महल भनेको हिमेजी महल हो, जुन एक विश्व विरासत साइटको रूपमा दर्ता गरिएको छ। क्यासल टावर र अन्य भवनहरू १ 17 औं शताब्दीको सुरूमा निर्माण गरिएका अझै छन्। यदि तपाईं जापानी परम्परागत संस्कृतिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं हिमेजी क्यासललाई थप्न सक्नुहुन्छ ...
यस पृष्ठमा, म जापानी महलहरूको परिचय दिनेछु। जापानमा ठूला पुराना किल्लाहरू छन्। सब भन्दा प्रसिद्ध Himeji महल र Matsumoto महल हो। यस बाहेक, कुमामोटो महल लोकप्रिय छ। धेरै दुर्भाग्यवस, कुमामोटो किल्ला भर्खरै ठूलो भूकम्पको कारण आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ र अहिले पुनर्स्थापना भइरहेको छ। मत्सुयामा ...
जापानको गोधूलि = शटरस्टकमा कोबे क्षितिजको पोर्ट
व्यक्ति नीलो मूनलाइट, कोबे, जापान = शटरस्टक द्वारा छाया
माउंट मा Kikuseidai प्लेटफर्म बाट रात दृश्य माया दृश्य रेखा कोबे, जापान मा। "जापानमा शीर्ष Night रात दृश्य" = शटरस्टक
फोटोहरू: कोबेको रात दृश्य
यदि तपाईं क्योटो वा ओसाका जानुहुन्छ भने, कृपया ह्योगो प्रान्तको कोबेमा ड्रप गर्नुहोस्। कोबेमा, तपाईं सजिलैसँग रोपवे वा केबल कारद्वारा पर्वत चढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईं त्यहाँबाट एक अचम्मको रात दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं ओसाका शहर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म दुई मा कोबे मा बस्ने ...
कोबे सिटी ह्योगो प्रान्तको दक्षिणी भागमा सेतो इनल्यान्ड सागर सामना गर्ने पोर्ट शहर हो। १ 1.5 लाख जनसंख्या भएको यो शहर ह्योगो प्रान्तको प्रान्तको राजधानी हो र क्योटो, ओसाका र नाराको साथमा कन्सई क्षेत्रको प्रतिनिधि क्षेत्र हो।
मुख्य पर्यटक आकर्षणहरू
उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तदेखि नै कोबे शहरले विदेश देशहरूसँगको व्यापारको माध्यमबाट विकास गरेको छ। त्यसो भए धेरै विदेशी नागरिकहरू यस पोर्ट शहरमा बसोबास गर्छन्। कोबेको पहाडीमा, २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पश्चिमी व्यापारीहरू बसोबास गर्ने रेट्रो घरहरू पछि परेका छन् र दर्शनीय स्थल हुन्।
कोबे शहर पूर्वी र पश्चिममा विस्तारित छ, र पहाडहरू समुद्रीतट क्षेत्रको उत्तरमा पूर्व र पश्चिममा जोडिएका छन्। मुख्य हिमालहरू माउन्ट हुन्। माया (702०२ मीटर उचाइ) र माउन्ट। रोक्को (931 XNUMX १ मिटर उचाई), दुबै पर्यटक आकर्षणहरू हुन्। कुनै पनि पर्वतमा तपाईं एक केबल कारको साथ शिखरमा जान सक्नुहुन्छ। यी हिमालहरूको शिखरबाट तपाईले केवल कोबेलाई मात्र नभई ओसाका प्रान्त र वाकायामा प्रान्तलगायत कन्साई क्षेत्रको समुद्री तटहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। साँझमा, तपाईं माथिको तस्वीर जस्तो रातको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
तपाईं कोबे पोर्टबाट आनन्दको डु board्गा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। बन्दरगाह नजिक एक ठूलो चिनटाउन छ।
१ lumin ar देखि हरेक डिसेम्बरदेखि कोबे, जापानको कोबेमा एक प्रकाश उत्सव हो जुन त्यस वर्षको शटस्टकको महान हन्शिन भूकम्पको सम्झनामा मनाउन सकिन्छ
5::46 जनवरी १,, १ 17 1995 on मा कोबे शहरको सम्पूर्ण क्षेत्र ठूलो भूकम्पले ग्रस्त भयो। राजमार्गहरू र भवनहरू भत्किए र एक पछि अर्कोमा आगो लाग्यो। यो भूकम्पले ,,6,434। व्यक्तिको ज्यान लियो। यस वर्षदेखि डिसेम्बरमा हरेक वर्ष कोबे शहरमा, प्रकाश उत्सव "कोबे लुमिनेरी" कोबेलाई विभिन्न तरीकाले रोशन गर्नको लागि आयोजित गरिएको छ।
म कोबेमा फेब्रुअरी १ ​​2 1994 until सम्म करीव २ बर्ष सम्म बसें। मलाई यो शहर मन पर्थ्यो। जब स्थान परिवर्तनको लागि टोकियो सर्ने निर्णय गरियो, कोबेका साथीहरूले मलाई भने, "टोकियो, त्यहाँ धेरै भूकम्पहरू छन्, त्यसैले सावधान!" तर कोबेमा भूकम्प भयो।
कोबे एक साँच्चै सुन्दर र मनमोहक शहर हो। यदि तपाईं कोबेले रोक्नुभयो भने, म साँच्चिकै मेरो हृदयको मुटुबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु।
>> कृपया कोबेको विवरणको लागि आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
अरिमा ओन्सेन, कोबे, जापान हट स्प्रि res्स रिसोर्ट सहर = शटरस्टक
अरिमा ओन्सेन कन्साई क्षेत्रको ठूलो स्पा प्रतिनिधि हुन्। यो कोबे शहरको उत्तरी भागमा छ।
कोबेको समुद्री तटमा पहाडहरू छन्। अरिमा ओन्सेन यी हिमालहरूको उत्तरमा छ। तपाईं सजिलैसँग कोबे दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमणको क्रममा अरिमा ओन्सेनमा जान सक्नुहुन्छ।
अरिमा ओन्सेनको सम्बन्धमा, मैले जापानी हट स्प्रि onमा लेख लेखेकी छु। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र यो छुट्टै पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
>> कृपया अरिमा ओन्सेनको विवरणहरूको लागि यो लेख हेर्नुहोस्
रातमा रूखहरू नहरमा प्रतिबिम्ब सहित, किनोसाकी ओन्सेन, जापान = शटरस्टक
किनोसाकी ओन्सेन (ह्योगो प्रान्त) पारम्परिक तातो वसन्त शहर हो जुन जापानको समुद्रमा केन्द्रिय होन्शुको छेउमा अवस्थित छ। क्योटो स्टेशनबाट जेआर सीमित एक्सप्रेस ट्रेनले यसलाई २. hours घण्टा लिन्छ। किनोसाकी ओन्सेनमा तपाई शहरको वरिपरि हिड्दा विभिन्न तातो स्प्रि experienceहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। वसन्तमा, चेरी फूलहरू ...
ह्योगो प्रान्तमा, त्यहाँ म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु अर्को अद्भुत तातो वसन्त। यो किनोसाकी ओन्सेन हो जुन जापानको समुद्रीतर्फ उत्तरी ह्योगो प्रान्तमा पर्छ।
किनोसाकी ओन्सेनमा ओन्सेन र्योकन (जापानी शैलीका होटलहरू) माथिको चित्रमा देखिएझैं नदी किनारमा अस्थिर छन्। जाडो मा, तपाईं आफ्नो ryokan मा स्वादिष्ट केकड़ा खान सक्नुहुन्छ।
किनोसाकी ओन्सेन पनि जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने तातो वसन्त हो, त्यसैले मैले जापानी तातो स्प्रि about्गको बारेमा लेखमा यस तातो वसन्तलाई परिचय गरिसकेको छु।
>> कृपया किनोसाकी ओन्सेनको विवरणको लागि यो लेख हेर्नुहोस्
Ehime प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
आईची प्रिफेक्चर: सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू